Soomaali lagu xiray dalka Romania. – iftiin fm
Soomaali lagu xiray dalka Romania.
October 22, 2020 October 22, 2020 Iftiin FM Reporter 0 Comment
Soomaali farabadan ayaa ku xiran Xabsiyo ku yaalla qaar kamid ah wadamada Afrika iyo Yurub, kuwaas oo qaarkood loo xiray inay si hsraci darro ah ku galayeen dalalkaas.
← Mareykanka iyo Ruushka oo ku heshiiyay nukliyeerka.
BBI: ismaamulada oo loo kordhin doono Lacagaha. →